Fetin’ny reny: mandeha ny « vente en ligne » | NewsMada
Fetin’ny reny: mandeha ny « vente en ligne »
Par Taratra sur 03/06/2020
Efa hatramin’ny herinandro teo, betsaka ny tolotra ataon’ireo mpivarotra amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy ho an’ny fetin’ny reny, homarihina ny alahady izao. Ao anatin’ny fihibohana ny tokantrano rehetra ka mamaha ny olana amin’ny fiantsenana ireny « vente en ligne » ireny.
Manoloana ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19, matahotra ny hitankosina amin’ny olona maro eny an-tsena ny ankamaroan’ny renim-pianakaviana ka mionona amin’izay tolotra hita anatin’ireny tambajotram-pifandraisana ireny.
Maro karazana ary efa fantatr’ireo mpisera ihany koa ny filan’ny renim-pianakaviana. Anisan’ny be mpitady koa ireo kojakojan-dakozia manaraka ny fivoaran’ny teknolojia ka hahavita karazan-tsakafo maro ny fampiasana azy.
Eo koa anefa ireo mpivarotra voninkazo izay ankafizin’ny reny maro ny mikarakara azy ireny ary betsaka ireo karazam-boninkazo sarobidy sy ambony karazana atolotr’ireo mpikarakara voninkazo.
Ankoatra izany ny ranomanitra izay mbola mahababo ny andriambavilanitra ihany koa. Ny akanjo mafana sy ny lamba firakotra hiatrehana ny ririnina….
Eny an-tsena ihany, betsaka ny entana natao hisarihana ny sain’ny renim-pianakaviana, saingy milaza ireo mpivarotra fa tsy misy mpanontany izany ankehitriny. Zara raha mahalafo izy ireo ao anatin’ny iray andro.